ကနေဒါ နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ၈၈ မျိုးဆက်များ ညီလာခံအကြိုဂုဏ်ပြုပွဲ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/29/20130အကြံပြုခြင်း
မလေးရှား နှင့် ထိုင်းနယ်စပ် မြန်မာများ အဆောင်ကိုမီးတင်ရှိူ့
Aprils Kyaw's photo.
Gua Musaung နှင် ကီလိုမီတာ၂၃၀ခန့်ဝေးသော
မလေးရှား နှင့် ထိုင်းနယ်စပ်ရွာတရွာရှိ Overstay မြန်မာများ
အဆောင်အား ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီများနှင့် မလေးနိုင်ငံသားအိန္ဒိယများက
မလေးရှားရဲများက မြန်မာ Overstay များကို နေအိမ်အဆောင်ရောက်ဝင်ဖမ်းနေပုံ
ပုံတွငါပြထားတာကတော့ Kualumpur မြို့ရှိ ချင်းတိုင်းရင်းသားများ၏ overstay အဆောင်တွင်ဝင်ရောက်ဖမ်ဆီးပြီး ကျန်ရစ်သူမိသားစုများကပြန်လွှတိပေးရန်တောင်းဆိုနေပုံ
စိုင်းအေပရယ်မိုး — with Nwe Nwe and 53 others.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/24/20132အကြံပြုခြင်း
အင်းစိန်ရွာမ ညီလာခံသို့ ရဟန်းရှင်လူ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်
by Wira Thu (Notes) on Monday, June 24, 2013 at 12:49pm
TIME-မဂ္ဂဇင်းပါ သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများ၏ အားပေး စကားများကြောင့် ဦးပဉ္စင်းဝီရသူ ပို၍ပင် အားရှိ အားပြည့် သွားပါပြီ။ သည်အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင် မိပါသည်။
ဦးပဉ္စင်းငယ်စဉ် ကျောင်းသားဘဝက တော်လှန်ရေးတရုတ်ဇာတ်ကား ကြည့်ခဲ့ဖူးပါသည်။ တီလုံးနှင့် တော်လှန်ရေး လူငယ်အနဲစုလေးက အင်အားသောင်းချီရှိသည့် ရန်သူများကို ခုခံကာကွယ်နေသည်ကို မကြည့်ရက် မမြင်ရက်သော ဒေးဗစ်ချမ်းက အားနည်းသူ တီလုံးဘက်မှ ဝင်ရပ်တည်လိုက်သည့် အခါ ရန်သူများ ကျဆုံးသွားကြပါသည်။
ဦးပဉ္စင်းဝီရသူကို TIME-မဂ္ဂဇင်းလို လက်နက်ကြီးဖြင့် အနိုင်ကျင့် စော်ကားသည်ကို မကျေနပ်ကြသော ကြောင့် မဖြစ်ဖူးမြဲ၊ ထူးခဲဖြစ်စဉ်တစ်ရပ် အနေဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ ပြည်သူ ပြည်သားများ ညီညွှတ်စည်းလုံးနိုးကြား တက်ကြွလာသည်မှာ မည်သည့် ခေတ်နှင့်မျှ မတူပါ။ ကြည်ညိုလေးစား အားရကျေနပ်ဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ ဒေးဗစ်ချမ်းများ ပေါ်လာပြီး၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေး လှုပ်ရှားမှု အောင်တော့မည်ဟုပင် ခံစားမိပါသည်။ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပေးကြသော သတင်းမီဒီယာ အားလုံးနှင့် အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဓမ္မဘက်မှ ရပ်တည်ပေးသော သမ္မတရုံးကြေညာချက်ကိုလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါသည်။
အငိုသန် အချွဲသန်သူတို့၏ ငိုပြ ချွဲပြသည်ကို အဟုတ်ထင်နားယောင်ကာ ကျောင်းပေါ်ထိတက်၍ စော်ကားခဲ့သော Hannah Beech-သူငယ်မခမျာ သနားစရာကောင်းလှပါသည်။ ဦးပဉ္စင်းကတော့ မေတ္တာ မပျက်ပါ။
၂၇-၆-၂၀၁၃-ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် အင်းစိန်ရွာမ ညီလာခံသို့လည်း ရဟန်းရှင်လူ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ခေတ် မည်သည့်အခါနေ့မျှ မတူသော သံဃာထု လူထု၏ စည်းလုံးညီညွှတ် မှုကို ဖူးမြင်ကြည်ညိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/24/20130အကြံပြုခြင်း
တော်ဝင်ဆုထူးပန်တာဝါ ဆောက်ရန်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အကယ်ဒမီ ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေနှင့် Father Land ကုမ္ပဏီတို့ အပြန်အလှန်ရှင်းလင်း
Created on Monday, 24 June 2013 06:14
ဇွန် ၂၃ ရက်က အကယ်ဒမီ ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေမှ ရှင်းလင်းနေစဉ်
တော်ဝင်ဆုထူးပန်တာဝါ ဆောက်လုပ်မည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အကယ်ဒမီ ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေနှင့် Father Land ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတို့ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နှင့် ၂၃ ရက်နေ့များတွင် သတင်းမီဒီယာများအား ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"အန်တီဝါပိုင်တဲ့ မြေပေါ်မှာ ဆုထူးပန်တာဝါ (၁၂ ထပ် အဆောက်အအုံ) ဆောက်ဖို့ Father Land ကုမ္ပဏီကို ကန်ထရိုက် ငှားခဲ့တာပါ။ အဲဒီအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန် တစ်နှစ်ကျော်တဲ့ အချိန်အထိ ဘာမှအကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးပါဘူး။ စာချုပ်စချုပ်တဲ့နေ့မှာ စရန်ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ပေးတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းသဘောအရ ကျပ်သိန်း ၇၀၀၀ ထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ စည်ပင်သာယာဘက်ကို ဆောက်လုပ်ခွင့် တင်ပြဖို့ အပိုင်းကိုလည်း တာဝန်ယူမယ်လို့ ပြောပြီးတော့ ဘာမှလှုပ်ရှားမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ သိန်းပေါင်း ၈၀၀၀ ယူပြီးနောက်ပိုင်း ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ကို ငွေအရမ်းကျပ်နေလို့ဆိုပြီး ထပ်တောင်းပါတယ်။ စုစုပေါင်းကျပ် သိန်း ၉၀၀၀ ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ပါဘူး။ အခုအချိန်ထိလည်း အန်တီဝါ မြေပေါ်မှာ ပိုင် ၁ ချောင်းတောင် မရိုက်ရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် မီဒီယာတွေကို အခုလို ခေါ်ရှင်းတာပါ။ ဒီနေ့ကစပြီး Father Land ကုမ္ပဏီနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ကို တရားဝင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ အန်တီ ဒီကိစ္စကိုလုပ်တာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး လုံးဝမပါပါဘူး" ဟု ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေက ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
"လူမှုရေးအပိုင်း အရမှာလည်း ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်မှာ ဆူထူးပန်တာဝါရှေ့ မြေကွက်မှာ ညသန်းခေါင်ယံအချိန် ဦးကျော်မြင့် အပါအ၀င် လူ ၄ ဦးက အမဲသားပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင် လာထွန်းတယ်။ အဲဒါကို အဲဒီနားမှာနေတဲ့ သူတွေတွေ့တယ်။ အန်တီဝါ့ကိုပြောတော့ အန်တီဝါက သူ့တို့ဘာသာအရ လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင် လုပ်တာပဲဆိုပြီး တွေးခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ အဲဒီလိုပဲ သူကိုယ်တိုင်လာပြီး ထပ်ထွန်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက် နေ့မှာ ထပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပြီး သူတို့ပြန်သွားတော့ အဲဒီနားမှာနေတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်က အနားကိုသွားပြီး မီးလောင်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သဲနဲ့ပက်ငြှိမ်းပြီး ပစ္စည်းတွေ သွားယူခဲ့တယ်။ သူတို့ယူလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ အန်တီဝါ ဓာတ်ပုံအောက်မှာ အင်းကွက်တွေချထားပြီး ဆေးဖယောင်းတွေနဲ့ မီးထွန်းထားတာ ဓာတ်ပုံကို မီးလောင်နေပြီ။ အဲဒါကို အန်တီဝါသိတော့ အင်မတန် ၀မ်းနည်းခဲ့ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာ ဦးကျော်မြင့်ကိုခေါ်ပြီး ပြတယ်။ ဒီကိစ္စ မင်းကိုယ်တိုင် လုပ်သလားလို့မေးတော့ သူကိုယ်တိုင်လုပ်တာပါလို့ ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူက အဲဒါကောင်းဖို့ လုပ်တာလို့လည်း ပြောပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကောင်းဖို့လုပ်တာဆိုရင် ဓာတ်ပုံကို မီးရှို့မလားလို့ မေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာသူက ဒီအဆောက်အအုံကို သူနဲ့ဆက်မဆောက်လို့ ရပါတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ အန်တီဝါ အဲဒီအချိန်တုန်းက မိတ္ထီလာမှာ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မို့လို့ နှုတ်ပိတ်နေခဲ့တယ်။ ဒီလို အောက်လမ်းနည်းအရ အန်တီဝါ့ကို တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ အန်တီဝါဘယ်လိုမှ ဆက်မလုပ်နိုင်တော့သလို Father Land ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့လည်း လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါဘူး" ဟု ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေက ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့သည်။
လုပ်ငန်း ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့၍ စရံအဖြစ် ပေးချေထားသည့် ငွေများအား ပြန်ပေးရန် ၁၁ ကြိမ်တိတိ ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေ၏ရှေ့နေ ဦးသန်းဋ္ဌေးမှတစ်ဆင့် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ငွေများကို အရစ်များခွဲ၍ ပြန်ပေးဖို့ သဘောတူညှိနှိုင်းရန် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ပြောခဲ့သော်လည်း Father Land လာရောက်ခြင်း မပြုခဲ့ဘဲ ရှောင်နေကြောင်း၊ ယင်းနောက်ပိုင်း ၎င်းတို့နှင့် ဆက်မလုပ်ဘဲ မြေအားပြန်ပေးရန်ပြောတော့ မြေပြန်လိုချင်ပါက စရန်ငွေအဖြစ် ကျပ်သိန်း ၉၀၀၀ အဆုံးခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသဖြင့် မြေကြီးအား ကျပ်သိန်း ၉၀၀၀ ဖြင့် ရွေးယူရမည့်သဘော ဖြစ်နေကြောင်း ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေ ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့သည်။
ယခု ဆုထူးပန် တာဝါအား ဆောက်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းထားပြီး လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေမှ ပေးချေသည့် ငွေပမာဏ မူလသဘောတူထားသည့် ၁၂ ထပ် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရမည့် ငွေပမာဏပင် မပြည့်မီကြောင်း၊ ထပ်မံသဘောတူခဲ့သည့် ၂၁ ထပ် ဆောက်လုပ်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းထားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူဘက်မှ လုပ်ငန်းဆက်မလုပ် ဖြစ်ပါက ပေးချေထားသည့် စရံငွေ ကျပ်သိန်း ၉၀၀၀ ပြန်ပေးမည် မဟုတ်ဘဲ ဆုံးရှုံးမည် ဖြစ်သည်ကို အကြောင်းပြန်ထားကြောင်း ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် Father Land ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများက သတင်းမီဒီယာများကို ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
"အဓိက ပြဿနာက လုပ်ငန်းအပ်နှံသူဘက်က ပေးချေတဲ့ ငွေပမာဏ မပြည့်မီတာရယ်၊ သတင်းစာမှာ လူနေအိမ်ခန်းတွေ ရောင်းပေးဖို့ ကြော်ငြာတဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် အခုလို လုပ်ငန်းရပ်ထားရပြီး မီဒီယာတွေကို ရှင်းလင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူက ငွေအပြည့်အ၀ ပေးမယ်ဆိုရင် ရှေ့ဆက်ပြီး လုပ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဆက်ပြီးလုပ်မယ် ဆိုရင်လုပ်မယ်။ ဆက်မလုပ်ရင် စရံဆုံးမယ်လို့ သူတို့ကို အကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က တတ်နိုင်သလောက် ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ဖို့ တံခါးဖွင့်ပေး ထားပါတယ်" ဟုလည်း Father Land ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများက ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ သတင်းမီဒီယာများ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျပ်သိန်း ၉၀၀၀ ပြန်ပေးရန် ရှောင်နေသည့်အတွက် ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေ အနေဖြင့် Father Land ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်အား တရားစွဲဆိုမည်လားဟု သတင်းမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းချက်ကို "ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအကြောင်း နားမလည်လို့ သူ့ကိုပုံအပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အခုသိန်း ၉၀၀၀ ပြန်ပေးဖို့ကို ရှောင်နေတယ်။ သူမတရားလုပ်ပြီး သိန်း ၉၀၀၀ ကို စားမယ်ဆိုရင်လည်း စားပါစေ။ ဒါပေမဲ့ သိန်း ၉၀၀၀ ဆိုတာ မနည်းပါဘူး။ ပြန်မယူဘူးလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့ဆက်လုပ်မယ့် ကိစ္စကို အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားမှာပါ" ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကျပ်သိန်း ၉၀၀၀ မပေးချင်၍ ရှောင်နေသည့် အပေါ်တွင် Father Land ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ယင်းကိစ္စမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်းလည်း ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေ၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးသန်းဋ္ဌေးက "ဒီကိစ္စမှာ ငွေကိုအလွဲသုံးစား လုပ်တဲ့အတွက် တရားစွဲလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေ အနေနဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ မလုပ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ကာယကံရှင် ခွင့်ပြုချက် ရရင်တော့ တရားစွဲမှာပါ" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင်လည်း ဆုထူးပန်တာဝါ ဆောက်လုပ်မည့် မြေပေါ်မှ Father Land ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီအား ၂၄ နာရီအတွင်း ထွက်ခွာပေးရန် ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေဘက်မှ ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/24/2013 1 အကြံပြုခြင်း
မလေးရှား နှင့် ထိုင်းနယ်စပ် မြန်မာများ အဆောင်ကိုမီ...
အင်းစိန်ရွာမ ညီလာခံသို့ ရဟန်းရှင်လူ မည်သူမဆို တက်ေ...
တော်ဝင်ဆုထူးပန်တာဝါ ဆောက်ရန်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အကယ်...